April 13, 2021 - Cele Fans
[ May 7, 2021 ] စစ်တိုင်း၅ တိုင်းဖွဲ့ပြီး စစ်ကောင်စီတပ်ကို နှိမ်နှင်းဖို့ ခြေလှမ်းစတင်လိုက်ပြီ	Local News
[ May 6, 2021 ] MMA အားကစားသမား ဖိုးသော် လက်လုပ်မိုင်းလုပ်မှုနဲ့ စွပ်စွဲဖမ်းဆီးခံရ	Local News
[ May 6, 2021 ] တကယ့်အလင်းတန်းကို မရမချင်းနေ့တိုင်းဟာ ငါတို့ရဲ့တော်လှန်ရေးနေ့တွေချည်းပဲ လို့ဆိုလိုက်တဲ့ မြနှင်းရည်လွင်…..	Celebrity
[ May 6, 2021 ] ၂၀၂၁ ဧပြီလကုန် – မေလဆန်းတွင် မိုးကြိုးမုန်တိုင်းများ ပြင်းထန်လာနိုင်	Local News
[ May 6, 2021 ] တစ်ပတ်စာ ၇ရက်သားသမီးဟောစာတမ်း . 6.May.2021 မှ 12.May.2021 အထိ	Knowledge
ကမ္ဘာ့မိခင်အဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းကို 43 နိုင်ငံမှ လက်မှတ်ထိုးပြီဖြစ်ကြောင်း သတင် းရရှိခဲ့
April 13, 2021 Cele Fans 0
ကမာၻ႔မိခင္အျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္းကို 43 ႏိုင္ငံ လက္မွတ္ထိုးၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းေကာင္း ကမာၻ႔မိခင္အျဖစ္သတ္မွတ္ျခင္းကို 43 ႏိုင္ငံ လက္မွတ္ ထိုးၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းေကာင္းၾကားရလို႔ ဝမ္းသာပီတိျဖစ္ မွ်ေဝလိုက္ရပါတယ္။ ေမတၱာေပးတဲ့သူဘက္က စစ္မွန္ရင္ လက္ခံရရွိသူဘက္ကလဲ ခံစားၿပီး သိႏိုင္ပါတယ္။ ေမတၱာေစတနာေတြသာ တကယ္မွန္ရန္ သူေတာ္ေကာင္းေတြက သိရွိ လက္ခံၾကပါတယ္။ လူတစ္ေယာက္ဟာ အမွားကင္းတယ္လို႔မရွိေပမယ့္ အသိပညာႂကြယ္ဝတဲ့ အမ်ားျပည္သူကလက္ခံထားၿပီး ခ်ီးမြန္ေျပာဆိုေနတယ္ဆိုရင္ အဲ့ဒီပုဂၢိဳလ္ဟာ သာမာန္ထက္ေတာ့ အမ်ားႀကီး တန္ဖိုးရွိေနပါၿပီ။ တန္ဖိုးရွိတဲ့သူတစ္ေယာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာရွိေနျခင္းက […]
ခင္ဗ်ားတို့ၿမိဳ့ေတာ့ မသိဘူး က်ဳပ္တို့ မႏၲေလး ကေတာ့ ဒီလိုဗ်
ခင္ဗ်ားတို့ၿမိဳ့ေတာ့ မသိဘူး က်ဳပ္တို့ မႏၲေလး ကေတာ့ ဒီလိုဗ် မယုံရင္ ဆိုင္ကယ္ အေကာင္းေလးစီး ဖုန္း အေကာင္းေလး ကိုင္ၿပီး ျမိဳ့ပတ္ၾကည့္ပါလား (Zawgyi Code ဖြင့် ဖတ်မရသူများအတွက် အောက်တွင် ယူနီကုဒ်ဖြင့် ဖော်ပြထားရှိပါသည်) ဇမၺဴသစ္ ကေဖးက ပိုင္ရွင္နဲ႔တီးဆရာကို ၁၅ သိန္းေတာင္း ၃ သိန္း နဲ႔တည့္ၿပီး ျပန္လႊတ္ေပးလိုက္သတဲ့ လမ္းသြားေနတဲ့ ဆိုင္ကယ္ေခၚစ.စ္ ဖုန္းေပး ဆိုေတာ့ ဖုန္းထဲဘာမွထည့္မထားေတာ့ ေပးလိုက္တာေပါ့ […]
” နောက်ထပ် တစ်မှုထပ်တိုးတယ်ဆိုပြီး ရုံးတော်က ပြောချိန် မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က နည်းနည်းတော့ ပြုံးသွားပါတယ်”
” နောက်ထပ် တစ်မှုထပ်တိုးတယ်ဆိုပြီး ရုံးတော်က ပြောတော့ အခါကျတော့ အဲဒီအချိန် မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က နည်းနည်းတော့ ပြုံးသွားပါတယ်” စစ်တပ်က အာဏာသိမ်းပြီး ဖမ်းဆီးခံနေရတဲ့ နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ဧပြီ ၁၂ ရက်နေ့ ဒီနေ့ နေပြည်တော် ဇမ္ဗူသီရိတရားရုံး မှာ အွန်လိုင်း ဗီဒီယို ကတဆင့် ရုံးထုတ် ခဲ့ပြီး သဘာဝဘေး စီမံခန့်ခွဲမှု ဥပဒေ ပုဒ်မ ၂၅ နဲ့ ထပ်မံ […]
သင်္ကြန်မှာ စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကို ရေမပက်ဖို့ လိုက်လံကြေညာ
မြန်မာ့ရိုးရာအတာသင်္ကြန်ပွဲတော်ကာလအတွင်း ရပ်ရွာဒေသတွေအတွင်းမှာ အဖျက်အမှောက်လုပ်ငန်းများ၊ ဆူပူအကြမ်းဖက်မှုများမပြုလုပ်ကြရန်နဲ့ မြို့နယ်အတွင်း လုံခြုံရေးဆောင်ရွက်နေတဲ့ လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များ တပ်မတော်သားတွေ၊ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကို ရေပက်ခြင်းမပြုဖို့အာဏာပိုင်တွေက ရန်ကုန်မြို့နယ်တချို့မှာ ဧပြီ ၁၂ ရက် ညပိုင်းကစလို့ လိုက်လံကြေညာခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီအသိပေးကြေညာချက်တွေကို လိုက်နာခြင်းမရှိရင် တည်ဆဲဥပဒေတွေနဲ့အညီ အရေးယူသွားမယ်လို့လည်း ပြောပါတယ်။ ဒီနေ့ဟာ နှစ်ဟောင်းကုန်ဆုံးလို့ နှစ်သစ်ကူးပြောင်းချိန် မဟာအတာသင်္ကြန်ပွဲတော်ကာလ စတင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ စစ်အာဏာသိမ်းထားပြီးနောက် ရက်ပေါင်း ၇၀ ကျော်မှာ ကျရောက်လာတဲ့ သင်္ကြန်ကို မဆင်နွှဲဖို့၊ စစ်အာဏာသိမ်းမှုကိုဆန့်ကျင်တဲ့ […]
စစ်တိုင်း၅ တိုင်းဖွဲ့ပြီး စစ်ကောင်စီတပ်ကို နှိမ်နှင်းဖို့ ခြေလှမ်းစတင်လိုက်ပြီ
MMA အားကစားသမား ဖိုးသော် လက်လုပ်မိုင်းလုပ်မှုနဲ့ စွပ်စွဲဖမ်းဆီးခံရ
တကယ့်အလင်းတန်းကို မရမချင်းနေ့တိုင်းဟာ ငါတို့ရဲ့တော်လှန်ရေးနေ့တွေချည်းပဲ လို့ဆိုလိုက်တဲ့ မြနှင်းရည်လွင်…..
၂၀၂၁ ဧပြီလကုန် – မေလဆန်းတွင် မိုးကြိုးမုန်တိုင်းများ ပြင်းထန်လာနိုင်
တစ်ပတ်စာ ၇ရက်သားသမီးဟောစာတမ်း . 6.May.2021 မှ 12.May.2021 အထိ